Tilmaamaha 7 ee Shaqaalaha Bulshada | Martech Zone
Tilmaamaha 7 ee Shaqaalaha Bulshada
Arbacada, Nofeembar 6, 2013 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Maalintii Isniinta, waxaan wadaagnay xog-ururinta ka socota Suuq-geynta Bulshadda Buluugga ah, Magacaaga oo ah Meere, bixinta caddayn iyo isbarbardhig fudud oo ka hadlaya awoodda adeegsiga shaqaalahaaga si ay uga caawiso kobcinta raadadkaaga warbaahinta bulshada. Waxay ka baxsan tahay dhawaaqa astaantaada, in kastoo, sida aad ku arki doontid boggaggooda cusub.
Maaddaama aan ku sharaxeyno buuggeena ugu iibinta badan Amazon, Shaqaalaha Bulshada: Sidee Shirkadaha Waaweyn Ugu Sameeyaan Warbaahinta Bulshada, Khalad ma jiri karo in calaamadaha cilaaqaadka macaamiishooda iyo shaqaalahooda ay isbedelayaan. Suuqa dijitaalka ah, codka saxda ah ee shaqaalaha bulshada wuxuu noqon karaa hantida ugu awooda badan sumcadda abuurista xiriir muddo dheer, firfircoon oo lala yeesho macaamiisha iyo xubnaha kale ee muhiimka ah ee bulshada internetka.
Hawlgelinta shaqaalaha, ka mid noqoshada xirfaddooda warbaahinta bulshada, u heellanaanta shirkadda, awooddooda iskaashi, xirfadahooda dhageysiga, xirfadahooda macaamiisha iyo awooddooda inay saameyn ku yeeshaan isbeddelka ururka dhammaantood waa astaamo shaqaale bulsheed oo cajiib ah. Hadda waxaad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad raadisaa iyaga!
Tags: suuq geynta buluugga ahshaqaalaha bulshadabuuga shaqaalaha bulshadashaqaalaha bulshada
Hubka Sirta ah ee Suuqgeynta iyo Iibinta Fiican